Indawo yokucwenga iPetroleum - iNewwayway Valve Co., Ltd.
Ukuhluzwa kukaphethiloli kubhekisela esitshalweni esikhiqiza udizili, uphethiloli, uphalafini, uwoyela othambisayo, i-petroleum coke, i-asphalt, ne-ethylene kusuka ezinqubweni ezifana ne-distillation, i-catalysis, ukuqhekeka, ukuqhekeka, kanye ne-hydrorefining kawoyela ongahluziwe okhishwe ekwakhekeni.
Ama-valve akhiqizwa yi-NEWSWAY angahlangabezana ngokugcwele nama-valve ahlukahlukene adingwa yisihlungi ukuvimbela umlilo, ukuqhuma nezinye izimo eziyingozi futhi aqinisekise ukusebenza ngokuphepha kwemishini.
Kumayunithi wokuhluza, amayunithi asetshenziswa kakhulu nokukhethwa kwama-valve okuhambisanayo okwenziwe yi-NEWSWAY valve:
Amadivayisi we-Catalytic: ama-plug valves, ama-valve wokuya ngandlela-thile, ama-valve wokushisa aphezulu we-butterfly, ama-valve womoya omvemvane, ama-valve esango lokushisa okuphezulu, ikakhulukazi ama-valves wokushisa agqoke ukumelana.
Ukukhiqizwa kwe-Hydrogen, i-hydrogenation, iyunithi yokuguqula: i-orbit ball valve, valve yokulawula, i-Y-type globe valve, hydraulic butterfly valve, high pressure valve, ingcindezi imvamisa iphakeme kune-1500LB.
Idivayisi yokupheka: izindlela ezimbili zebhola, i-valve yebhola lezindlela ezine, i-plug valve, ikakhulu isuselwa kumaphayiphu okushisa aphezulu, okokusebenza ikakhulu kuyinsimbi ye-chrome-molybdenum. Ingcindezi ephezulu yensimbi yebhola evimba kanzima, imvamisa isuka ku-1500 LB iye ku-2500 LB.
Iyunithi yeziphuzo zazihlanza ze-Atmospheric ne-vacuum: kagesi esangweni valve, eyenziwe chrome molybdenum nensimbi engagqwali
Idivayisi yesulfure: isivalo esikhulu sejakhethi yokuvala umoya, i-valve yesango eboshwe, i-valve yebhola eboshiwe, i-valve yejacket evaliwe, i-valve yovemvane ejaziwe.
Idivayisi ye-S-zorb: I-valve yensimbi eqinile yensimbi, edingekayo ukugqoka nokushisa okuphezulu.
Iyunithi ye-Polypropylene: insimbi engagqwali womoya ibhola valve
Ayikho idivayisi ethile: ikakhulukazi elawula i-valve: i-pneumatic butterfly valve, i-pneumatic ball valve, i-pneumatic segment ball valve, i-globe control valve nokunye.